Sida loo soo celiyo xogta lumay kaarka SD - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>>so>Sida loo soo celiyo xogta lumay kaarka SD
Kaarka SD wuxuu lumiyaa xogta waqti ka waqti .. Haddii aad la kulanto macluumaad lumis, waxaad ubaahantahay inaad walwasho .. Waxaad si fudud u soo ceshan kartaa dhamaan noocyada xogta ka luntay kaarka SD adoo raacaya habka maqaalka. Ku saabsan soo-kabashada xogta kaarka SD
Ku saabsan soo-kabashada xogta kaarka SD ee tijaabada bilaashka ah ee tijaabada ah " Ka tirtir ama qaab ka soo kabashada xogta kaarka SD? Kaarka SD SD (SecureDigital) Kaarka xusuusta waa qalab keyd caan ah, oo aad u balaaran. Waxaa loo adeegsaday taleefannada gacanta, kaamerooyinka dijitaalka ah, kaamirooyinka fiidiyowga iyo alaabada kale ee elektiroonigga ah. Kaarka SD wuxuu bixin karaa meelo keyd ah oo kala duwan sida 4G, 8G, 32G, iwm., Adeegsadayaashu waxay dooran karaan inay u adeegsadaan si waafaqsan baahiyahooda. Kaarka SD wuxuu kuxiran karaa kombiyuutarka USB-ga isagoo adeegsanaya kaar aqrinta si loogu gudbiyo xogta. Kaarka SD ee loo adeegsado taleefannada mobilada guud ahaan waa 1-2 inji cabirkooda waxaa loo yaqaan kaarka MicroSD inkasta oo kaarkan uu yar yahay oo is haysta, wali wuxuu siin karaa meel keyd ah oo ku filan dadka isticmaala.Hadii keydka taleefanka moobaylka uusan ku filneyn, adeegsadayaashu iskood ayey isku dari karaan. Kaarka SD, sawirrada duubista, fiidiyowyada, muusikada, codsiyada iyo xog kale. Kaarka D wuxuu la mid yahay warbaahinta kaydinta sida Kaarka CF, sanduuqa xusuusta, U disk, disk adag, iwm Ma jiro qaab dhisme sida platter kombiyuuterka adag .. Warbaahinta kaydinta sida kaarka SD waa inay ku keydisaa xogta FLASH chip. Qaabka nidaamka caamka ah waa FAT12 , FAT16, FAT32, exFAT, iwm. Ka dib markii xogta kaarka SD lumay, waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa habka dib u soo kabashada xogta si aad u soo ceshato xogta. Xaaladaha guud ee xogta luminta SD waxaa si aad ah loogu kala qaybiyaa guul-darrooyinka jirka iyo guuldarrado macquul ah. Khasaaraha xogta eey sababtay caqli galkii kaarka SD, tusaale ahaan, feylasha si qalad ah ayaa loo tirtiray, si qalad ah loosameeyay, kaarka SD lama akhrin karo (ma furi karo qaabeynta deg degga ah, iwm.), Adeegsadayaashu waxay isticmaali karaan soo kabashada xogta, softiweerka 'Bplandatarecovery' si ay u soo ceshaan feylasha lumay laftooda . Cilad la'aanta jireed ee kaarka SD, tusaale ahaan, haddii kaarka aan lagu aqoonsan barnaamijka Bplandatarecovery, waxaad u baahan tahay inaad caawimaad ka raadsato injineer farsamo si aad u dhameystirto soo kabashada xogta kaarka SD. Bplandatarecovery waa barnaamij xirfadeed oo soo kabashada kaarka SD, wuxuu leeyahay algorithm gaar ah oo loogu talagalay soo kabashada xogta kaarka SD. , Waxay siin karaan isticmaaleyaasha saameyn faylka heerka-kabashada saameynta. Macaamiisha yaryar ee yar yar iyo isticmaaleyaasha xirfadleyda ah waxay u adeegsan karaan barnaamijkan softiweerka kaararka SD soo celinta. Software-ka wuxuu taageeraa noocyo kala duwan oo ka mid ah nidaamyada Windows wuxuuna leeyahay is waafajin wanaagsan oo ku saabsan nidaamyada kumbuyuutar ee Windows.Taas waxaa sii dheer, softiftigu wuxuu sidoo kale taageeraa qaababka faylka sida FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, iyo EXT4. Qaab-celinta qaabab ee warbaahinta kaydinta kala duwan sida U disk, kaadhka xusuusta, disk-ga saxda ah iyo wixii la mid ah. Fur bogga rasmiga ah ee Bplandatarecovery, waxaad kala soo bixi kartaa barnaamijka tijaabada ah bilaash. Natiijooyinka iskaanka ee nooca tijaabada ah iyo nooca xirfadleyda ah waa isku mid .. Adigoo adeegsanaya barnaamijka tijaabada ah, waxaad si sax ah u fahmi kartaa xaalada kama dambeysta ee kaarka SD. Tallaabooyinka soo kabashada xogta kaarka SD: Sidee looga soo kaban karaa tirtiray ama loo habeeyay xogta kaarka SD? Soo degso nooca ugu dambeeyay ee softiweerka websaydhka rasmiga ah ee Bplandatarecovery. Ka dib markaad soo dejiso, uma baahnid inaad ku rakibto. Xusuusin: Ha ku keydin barnaamijka kombiyuutarka kaarka SD ee u baahan soo kabashada xogta. Ku xir kaarka SD ee xogta lumay kombiyuutarka, ka dibna waad ku gudbi kartaa hawlgallada soo kabashada ee soo socota. Tallaabada 1: Orod barnaamijka 'Bplandatarecovery', dooro kaarka SD ee u baahan inuu ka soo kabsado xogta kombiyuutarka, ka dibna riix batoonka dib u soo kabashada ee barta qalabka. diskiga kumbuyuutarka ku jira waxaa lagu soo bandhigayaa dhanka bidix ee Bplandatarecovery interface.Hadii aysan jirin USB USB halkan ku xusan oo ubaahan dib u soo kabashada, howlgalka soosocda ee soosocda looma qaban karo. Tallaabada 2: Hubi habka soo kabashada oo guji batoonka bilawga, softiweerku wuxuu bilaabaa inuu iskaa kaadhka SD. Marka la dooranayo ikhtiyaar soo kabasho, Xiao Bian wuxuu soo jeedinayaa inay kafiican tahay inaad raacdo qaabka barnaamijka softiweerka ah si loo hubiyo in softiweerku raadinayo xogta ugu badan ee luntay. Soo kabashada xogta kaarka SD
Tallaabada 3: Falanqeynta faylka. Xilliga skaanka ama skaanka ka dib, waxaad saadalin kartaa faylasha lumay. Adiga oo fiirinaya feylka, si dhaqso leh ayaad uheli kartaa macluumaadka aad rabto, oo waxaad go'aan ka gaari kartaa haddii faylka uu waxyeelloobey iyo in kale. Soo kabashada xogta kaarka SD
Tallaabada 4: Badbaadi faylka. Haddii aad rabto inaad dhameystirto nidaamka kaarka SD ka soo kabashada, waxaad u baahan tahay inaad nuqul ka sameysato oo keydiso xogta natiijooyinka iskaanka: iska hubi xogta aad rabto, waxaad guji isla markaana doortaa koobiga ikhtiyaarka faylka loo cayimay. Soo-koobidda
Kor ku xusan waa tillaabooyinka gaarka ah ee soo-kabashada xogta kaarka SD, haddii aad la kulanto SD Waad soo dagsankartaa nooca bilaashka ah ee Bplandatarecovery si aad iskaga baarto kaarka xusuusta kaarka ee luminta macluumaadka.Waxaad garan kartaa in feylka lagu soo ceshan karo tijaabada iyo in kale. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato soo kabashada xogta kaarka SD, fadlan eeg casharrada kale ee khadka tooska ah ama la xiriir adeegga macaamiisha Bplandatarecovery.
PreSida loo soo celiyo kaadhka SD ee xogta qaabaysan
NextMaxuu u luminayaa xogtii kaadhka SD ahayd